Ziva nhoroondo yekunzwisisa UN ajenda 2030: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa4 December 2019	• 14 Comments
Iyo internet yakaunza isu neruzivo rwakawanda zvekuti zvachinja kubva paruzivo rwekuziva kuti unzwe zvakanaka Sezvo TV yakashandurwa kubva kune inozivisa kune waini uye chipvaravara, yakazadziswa naJohn de Mol & co; Semuenzaniso, mazuva ano social media ndeye zvakanyanya nezvekunakidza uye kuseka mavhidhiyo uye kutarisa izvo shamwari dzako dziri kuita pa Instagram. Uye zvakare, zvakakosha kuti kuve nemifananidzo yakanaka nemavhidhiyo zvinoshungurudza izvo kwete kuti vanhu vachiri kuwana ruzivo chairwo.
Zvese midhiya nenhau dzemagariro zvese zviri kunzwa zvakanaka. Kana chimwe chinhu chanzwa senge inopisa yekugezesa, iwe unosvika kuvenga vanhu avo vanokanda mvura yechando mubhaini iyoyo. Izvi zvinokutyisa. Kunyangwe zvingave zvichidikanwa, nekuti nyika iri kunze iyo inodziya yekugeza inogona kunge isingaite uye inotapira pane isu sezvatinofunga, isu tingasarudza mvura inodziya yekugeza. Iyo yekare yakasimbiswa midhiya uye makuru ezvemagariro midhiya dzimwe nguva inotipa nhau dzakaipa, asi iyo inopinda kuburikidza inopisa mvura pombi uye saka haisi kukanganisa kunakidzwa.
Tinoda kuti imba yedu ive yakarongedzeka uye yakagadzikana uye isu tinoda kuratidzira shamwari dzedu dzichangoburwa gadget, zororo, svondo maviki ekuwana uye zvese izvo pama media media kuti vaone kufara kwatiri. Dzimwe nguva vamwe vanove nehupenyu hwakareruka, asi sekureba sekuda kwavo mafirimu, tine hukama neboka. Ndiani achiri akamirira 'chokwadi'. Chii icho icho zvakadaro? Kune akawanda masosi. Mumwe anoti izvi uye mumwe anoti. Zviri nani kwazvo kungogara uri murukova rwemvura inodziya uye kuva wakanaka. Vanoshoreka vanhu vakaita semvura inotonhora iri mubhavhu rinodziya. Vanhu avo vane dambudziko rechinhu chose chatinogona kubhabhatidza isu pachedu mune zvakanaka. Vaya vanhu vasina kunaka. “Muka? Mira zvakadaro. Ndiri munzvimbo chaipo.
Saka kana mumwe munhu akaita saMartin Vrijland akataura chimwe chinhu, iwe unozvunguzira kumberi. Iyo yema media media troll mauto yashandisa yakajairika yekupaza zano mune yega yega hurukuro nekupa online. Mashoko ane chirevo chisina kukodzera akabatana neVrijland pasina mvumo uye haudi kuve weboka iro. Iwe hautarise izvo zvirimo. Kana zvikanzi pamablogi kana maforamu kuti Vrijland ipenga rekupengera mufunge, iwe unotora izvo zvisingaite. Kwete, haapo: ndiyo migariro yenyika iyo iri kusimudzira. Nguva yekuzviona. Ngatiendei kupfuura uye titarise zvakanaka izvo zvirimo! Unoziva chii. Kutanga buda mubhavhu rako rinodziya, pfeka zvakanaka uye ipapo utore sip remvura yakachena uye yakanatswa. Izvi zvinoita kuti unzwe zvirinani.
Izvo zvinobatsira chaizvo kunzwisisa mashoma mashoma epfungwa muhupenyu. Hupenyu hausi kungogeza chaiko. Kana iwe uri kumafaro pane chimwe chikepe chakanaka uye uchitamba bhendi, ndiye munhu anokubvisa iwe munzvimbo yekutamba gamba rako gamba kana pane gomba mukati mehudyu yeTitanic? Kana iwe uchimira pachitima chechitima uine maungira ako mukati kuti uteerere kumumhanzi wako waunofarira uye haunzwi chitima chichimhanya kubva kumashure kwako; ndiye anokusundira panzira kuti adzivirire kupfuura muponesi wako? Kana iwe uchiziva kuti akaponesa hupenyu hwako, unofara here kuti wabviswa munzvimbo yako yekunyaradza? Kana vese vaaona vachimonera nemafoni avo kana uchinge warwiswa, unofara here nevari kunze kweboka rakauya kuzopindira? Ndizvozvo positive kunyeverwa nekufamba kwenguva. Ndizvozvo positive kana mumwe munhu akapindira. Iwe bhenda saka chaizvo an optimist uye zvakanaka kwazvo kana dzimwe nguva wakasvinura. Inogona kuponesa hupenyu hwako.
Kana iwe uri kuenda kufambidzana kana kupinda muukama, iwe ungatanga kuda kuziva zvakawanda nezvemumwe munhu. Paunotanga kushandira kambani, kazhinji unotanga kuda kuziva kana uchinzwa kumba ikoko. Muzhinji, isu tinoda kuziva zvakawanda nezveavo vatinopinda navo muhukama hwerefu. Mubvunzo ndewokuti isu takambotarisa here kune avo vatinogarisana navo kwenguva yakareba; uya watakakura naye. Kana mwana akaberekwa mutirongo, chinhu choga chaanoziva itirongo. Kana paine zvekushandisa mutirongo iyoyo, zvinovhiringidza zvinofadza uye zvinovaraidza. Ko iko kunze kunoratidzika sei? Kana iwe uchiziva kondinendi maunokura mairi, hazvireve kuti unoona iwo chaiwo iwo mufananidzo. Wakagara uchizviona kubva mukati. Hongu, iwe unogona kunge wakafamba uye iwe unoziva nyika dzakawanda, asi mubvunzo ndewako sei mufananidzo wepasirese wakavezwa. Kuziva kuti kuita uku kwatoitwa kubva mukuzvarwa uye kuti maonero enyika akave akavezwa nedzidzo, vezvenhau nezvematongerwo enyika, zviri kupinda. Wainzwa wakasununguka mukugeza inodziya yaunoziva.
Ko kana iyo inopisa bhubhu ichienzaniswa nebhendi paTitanic? Zvakadii kana iwe uchichengetwa mune yevaraidzo modhi zvekuti unonyatsogadzikana? Ko kana ukatanga kuona kuti zvinhu zvakawanda zvawakadzidza hazvina kunaka? Ehe, ini ndinonzwisisa kuti iwe unofunga pakarepo: "Ehe, chii chaunoziva nezve izvozvo?" Ndiani anoti ko masosi ako ndizvozvo here? Ini ndinoda kutenda chokwadi chakasimbiswa chesainzi chakatsigirwa nehurumende nevanyanzvi. Iwe haugone kuongorora zvese izvozvo iwe pachako. Hatina ruzivo rwe izvozvo. ”Ini ndinonzwisisa pfungwa dzako, asi zvakadaro zvinonyatso kukoshesa kuti uone kana chitima icho chaimhanyira kwauri. Ndizvozvo zvinonyatso kukoshesa kudzima mimhanzi yehusuru kubva mumusoro mako uye kutarisa pamusoro pamapfudzi ako. Ndizvozvo zvinonyatso kukoshesa kumhanya kubva tireya kuenda kune rimwe raft apo ngarava inogadzira mvura.
Tora tarisiro yakanaka
Saka ngatitarisei kumashure toona zvakaitika ipapo. Iwe tora dambudziko. Mushure mezvose, kutarisa pamusoro pamapfudzi inongori snapchat. Isu tinoenda kwechinguvana ita nhamburiko chaiyo. Zvinonakidza kuziva kuti ndiani akapenda maonero ako epasi uye kunzwisisa kuti iwe waigara uchiwedzerwa nemvura inodziya. Zvinonakidza kuwana kuti George Orwell akarwa muSpanish Civil War uye akawana kuti zvaakamboita kubva muhondo iyoyo zvakaunzwa zvakasiyana zvachose kumberi kwemba kupfuura zvaanga achifunga. Zvinonakidza kuti murume uyu akanyora bhuku 1984, maanotaura nezve "kugadzirisa chokwadi". Izvo zvinopfuura kupfuura kutsanangura zvimwe zvikamu zveiyi kunyengera mune 1 chinyorwa, saka ini ndinokupa zano kuti uongorore. Wongorora kuti sainzi uye nhoroondo zvinowira sei pasimba. Ichokwadi here kuti masayendisiti emamiriro ekunze anoita ruzha rwakasiyana anosarudzika? Ja, zvinoita sekudaro. Ichokwadi here kuti nhoroondo inocherechedzwa uye Winston Churchill akati, "Nhoroondo yakanyorwa nemukundi"? Ja, zvinoita sekudaro.
Ko kana iwe ukaona kuti zviitiko zvikuru zvakaitika kare zvakanyengerwa? Ah, hongu ini ndatoona maitiro ako .. Ko kana propaganda yacho yanga yakasimba kwemakumi emakore zvekuti yakakwanisa kupenda mufananidzo wakasiyana wezvechizvarwa? "Hongu. Asi vanhu vangadai vakasimuka ndiani anga ataura nezvazvo?" Zvakanaka, ndozvowo zviitiko! TV chete, bepanhau, Facebook inoratidza izvo zvavanoda iwe kuti uone. Ichokwadi kuseri kwekucensorship firita. Kazhinji hurumende dzinoshandisawo pawns inotora iyo nyaya uye ichibatanidza kune iro rakanyanyisa boka. Iwe unogona nyore kusundira kushoropodzwa kunze kwenharaunda, nekuti kana iwe uine zvese zvinoburitswa muhomwe yako, uri kutonga vanhu. Tichaita zvakasiyana.
Ini ndinokurudzira kuti uongorore nyaya dzinotevera. Iyo blockchain iyo yakabatsira Lenin (uye mutsivi wake Stalin) muchibatiso isimba rimwechete iro iro Adolf Hitler akabatsira muchiitiko chehondo uye yekutanga nerepiri hondo yenyika yakarongwa kuumba nyonganiso kuti iite kurongeka kutsva. Izvo zvine muromo. Enderera mberi.
Muhondo yenyika yekutanga, nyika yaichengeterwa nyika yeIsrael mu Balfour statement. In the Haavara chibvumirano kubva ku1933 kutamira kwevaJudha kusvika kuPalestina kwakanga kwave iko kunyorerwa neGermany. Nyika yeIsrael yakavakirwa nguva pfupi mushure meHondo Yenyika Yechipiri. Hondo Yenyika Yechipiri yakabata basa rinokosha mune izvi.
Iye Adolf Hitler mumwe chete uyo avanoda kuvenga maJuda nekuvabata nenzira yakashata nekutsvaka kuchena, 150.000 yaive nehafu nehafu maJuda mumauto ake, kazhinji sevakarwa hondo. Aive neinenge 15 hafu-mauto evaJudha nemajeneral, aine mamwe gumi nevaviri maJuda mune mamwe manzvimbo akakwirira. Muenzaniso unoshamisira kwazvo ndeweFundo Marshal Erhard Milch, mutungamiriri wechipiri waHermann Goering. Milch yakaita basa rakakosha mukumisikidza Rufiro. Milch aive nababa vechiJudha uye zvimwe amai vechiJuda.
Kune manzwi akawanda ekuti mufananidzo wemagirazi, unonzi 'holocaust', inyaya yekuparadzira, inotsigirwa neufakazi hwakafungidzirwa. Kuziva dissonance kunoitika nekukurumidza kana iwe uchifunga nezvazvo. Ruzivo rwakasiyana urwo rwunonzwa segirazi remvura inotonhorera mubhavhu rinodziya. Iwe unoda kutorwa kubhendi iri paTitanic kana chikepe chikanyura? Ehe, pamwe.
Kune bhiza riri pamitsipa zvakakosha kuve nemapofu, kuti arege kutsauswa zvakanyanya kubva pabasa rake reuranda. Kune munhu zvakakosha kubvisa mapofu uye kuti uwane mufananidzo wakanaka wepasirese wakavapoteredza. Ipapo iwe unogona kutarisira ramangwana. Kucherekedza kunyengera kuri munhoroondo, kunoita kuti vaone kuti yagara iri simba rakafanana rakaimbwa nemasisitere. Batsira muvengi akazvisika mune sando kugadzira nyonganiso. Izvi zvinobatsira iwe kuzadzisa zvinangwa zvepamusoro. Ko kana iro simba rekuvharira rakabatsira Adolf Hitler mukuita kuti boka revanhu riitwe nyowani uye agokwanisa kuvapa inviolability chimiro? Sei Adolf Hitler akazvikomberedza pamwe nevanhu vemadzinza echiJudha kana achida kuvakudza vese? Tarisa uone kuti ndiyani aigonesa mari yaHitler. Pa webhusaiti iyi uye mune mudura iwe unowana zvakawanda kana iwe ukashandisa munda wekutsvaga. Imwe yakanaka kutanga ndeyeyenzaniso ichi chinyorwa. Tora dambudziko rekutarisa pane zvirimo uye kuridzidza.
Nguva pfupi yapfuura yapasi rose hondo yenyika yakagadzwa pachikamu chepasi chakange chakachengetwa kare muchirevo cheBalfour munguva yehondo yenyika yekutanga (nyika yeIsrael) United Nations yakaiswawo. Mubvunzo ikozvino ndouyu: Izvi zvese zvakarongwa kwenguva yakareba here? Mubvunzo wakakura waunofanirwa kuzvibvunza ndewe: Unoziva here mutemo wekare weRoma we "Order kubva kumaChaos" muhondo dzese dzakakura? Ko Hitler aive ega akazvisika muvengi mupi akapa maAllies the alibi kuti bhomba Europe flat uye vakwanise kuisa nyowani nyowani kubva pamhirizhonga iyoyo? Hitler aive mutyairi wekutyaira ari kumashure kwekufambiswa kwakakurumbira kunzvimbo yeIsrael? Verenga uenderere mberi.
Wedu muchinda Bernhard ndiye aive kutyaira kuseri kwekutanga kwechikwata chebrandberg. Boka re jpgberg rakaumba hwaro hwevanhu vekuEurope. Mutungamiri wekutanga weEC uyo aive Gweta pasi paAdolf Hitler. Zita rake ainzi Walter Hallstein.
Ndinonzwisisa kana iwe uchifunga:Iyo ndiyo kodzero yakanyanyisa. Ini ndinonzwa Brexit, Nexit fanatics. Ini ndinonzwa Ivory Baudet". Icho chifananidzo chakave chakavezwa neiyochete midhiya uye nematongerwo ezvematongerwo enyika. Ivo vanoedza kubatanidza kutsoropodza kwese kurambidzwa kwepamutemo nesainzi yepamutemo neiyo yakanyatsogadzirwa mhando 'kurudyi'.
Kana isu tikatanga kuona kuti isu takatamba kwemakumi emakore neiyo imwe chete blockchain, ipapo tinobva taona kuti tiri kupupurira chinyorwa umo makanga warongwa nekuitwa maererano nehurongwa. Isu tinoziva zvakare kuti Hondo yenyika yakarongwa uye kuti zvakare chikamu cheiyo runyoro rukuru. Uye kana tangoziva izvozvo, tinogona kuziva kuti zvese zviri zviviri nhoroondo nesainzi kunyepedzera kwakanyanya kukurudzira nenhau uye zvemagariro enhau. Izvi zvinongoitika chete nekuti iyo yekare yemagetsi blockchaine yakazara izere pamusoro pako unopisa mvura yekugezera matsime. Mafungiro ako epasirese akave akavezwa nevarairidzi vepfungwa dzekare remagetsi zvekare?
Pamusoro pekuti imwezve hondo yakarongwa (hondo yekuti Jerusarema rive chairo), shanduko huru yesimba iri pachirongwa mune pfupi pfupi seyenhanho yepakati kune iyo yekupedzisira hondo huru. Uku kuchinja kwemasimba kunoreva kuti iyo US ichawa nehupfumi uye pamwe ingozobva kuNATO nekuda kwekunyanya kusawirirana. Isu takatoona kuti kusawirirana kunoratidzwa mukongiri nezuro hurukuro. VaDonald Trump naEmanuel Macron vakaita kusiyana kwavo zvakanyanya mumusangano weNATO muLondon.
Nepo kuderera kwehupfumi muUS kungangotungamira kuenda pasi (kuronga) kudonha kwaTrump, nyaya yeBrexit ichave iri kuEurope kwehupfumi hweEurope. Nekuti vezvematongerwo enyika uye vezvenhau vakabatanidza vezvematongerwo enyika neyakagadzirwa zvakanyatsovakwa (kurudyi) zvine hungwaru hwakavakirwa, dambudziko rakadai rezvehupfumi rinogona kupa kutanga kwekupidigura nepasirese nepfungwa dzinotsauka. Ndakatsigira izvozvo zvakare ichi chinyorwa uye mune vamwe vazhinji. Unogona kuverenga zvekare.
Imwe yehumweti hwakabatana neiyo (yakanyatsoshevedzwa kurudyi-mapapiro) iri ndeye 'vanoramba mamiriro ekunze'. Zvichida zvichawedzerwa kuti boka rakamiririra zvido zvevashandi vekare makuru maindasitiri, sechikonzero chekuramba kudziya kwepasirese. "Vakatarisira zvaifarirwa neindasitiri yemafuta nemugodhi wemarasha"Ichave nharo iyo inotorwa kubva kune yakagadzikana. Uye saka, kuburikidza nekubatanidzwa kwekuparara kwehupfumi uye stigmatization, iyo nzira yakavhurwa yekupedzisira yekubata nekushoropodzwa kwenguva refu yakarongwa UN ajeri 2030 (mutsivi wechinangwa 2021).
Fungidziro yangu ndeyekuti Turkey ichava iyo nyowani yepamusoro iyo ichakunda Europe. Izvi zvichave nyore kana paine (kuronga) kuparara kwehupfumi muUS uye Trump akasarudza kuti zvingave zvakanyanyisa kudhura kupa Europe iri kunetseka (nemasutu anokanganisa seMacron ayo NATO inodana 'uropi kufa') kunyange kuchengetedzwa kwenguva refu. Kana Europe ikakanganisika mune zvoupfumi (semhedzisiro, pakati pezvimwe zvinhu, gadziriro yeBrexit yakarongwa), ichave iri dambudziko rekuwedzera kumisikidza izvo zvipo zvakakwirira kubhajeti reNATO. Saka pane mukana wakanaka wekuti US ichatobvisa maoko ayo kubva kuEurope kuitira kuti vagadzire nzvimbo yezvandakanga ndichifanotaura pano kwemakore: kumuka kweHumambo hweOttoman. Turkey inogona kukwira muhomwe yemagetsi kana Europe ichipera mumhirizhonga uye inogona kuita semuponesi wedambudziko rakagadzirwa nemaune.
Uye nekushandurwa kwesimba kwesimba uye nekuchinja kwezvematongerwo enyika iwe uchaona kuti iwo mumwe mugwagwa unogara uchisundirwa mukati. Usafunge kuti Erdogan painotora simba, isu tinoerekana taita Islamic yakasimba yeEuropean. Kwete, tiri kuenda kuti tinoona zvinopesana. Tiri kuzoona kusunungurwa kumwechete kweIslam kwatakasangana nako muchiKristu. Iyo nyowani yemagetsi block iyo Europe ichatora inongotora pamusoro muraraungu ajenda. Iyo yeti muraravungu marongero andinotsanangura mubhuku rangu: mugwagwa unoenda kuLuciferian hutongi hwenyika, umo zvitendero zvepasi rese zvichabatanidzwa zvakare. Teerera kune mavara emuraraungu mune logo.
Iyo muraraungu ine mukurumbira uye chiratidzo cheiyo nyika itsva kurongeka. Uye kunyangwe iyo Turkey ichatungamira yakasimba muEurope, haina kuzombodzikisira chimiro chemugwagwa wakanangana nekugadzika kwenyika itsva. Izvo, zvakadaro, kutanga simba ichangobva kusikwa iyo inobatsira kubvunda Hondo yeNyika Yechitatu. Handiyamwa icho kubva pachigunwe changu. In ichi chinyorwa Ini ndinotsanangura kuti iyo agenda yaive yatove papepa mu1871. Mune ihondo yekupedzisira iyi (ichave iri pamusoro peJerusarema), humambo hweOttoman huchamukira kuUS neIsrael. Izvi zvinogadzira chisarudzo chekupedzisira chisina kusarudzika pakupedzisira chaipo simba rakananga kuUN.
Kunyangwe chokwadi chekuti kurwira kwakakodzera kuchaitika uye nyonganiso inodikanwa ichamuka, panguva ino mafambiro ezvematongerwo enyika anowana simba iro richaramba richisundira UN Age 2030, kunyangwe paine kusanzwisisika. Iyo ajenda inomirira matanho akasimba anofanirwa kuchengetedza zvakatipoteredza, asi chaizvo dzive nechinangwa chekuita kuti zvese zviratidzike mu 'internet yezvinhu' uye kuvaka dhijitari yekudzora yewebhu inotsvaga munhu wese chero nguva uye chero kupi. Ndakatsanangura zvakadzama ichi chinyorwa. Saka zvinokurudzirwa kuti uverenge zvakare.
Zvinotora kumwe kushanda kuti ubve kubva kunonzwika kunonzwika kwebhandi muTitanic bar uye musoro kune hupenyu hwe raft. Iwe unofanirwa kuita chimwe chinhu icho.
Ndokumbirawo utarise iyo ajenda 2030 uye urambe uine ziso pawebhusaiti yangu kuti ugone kuona zvakajeka izvo zviitiko zvese zvinobatsira mukuburitswa kweichi chinangwa. On iyi website Iwe uchawana tsananguro yakanaka yeiyo 2030 ajenda. Zvinokurudzirwa zvakare kuverenga bhuku rangu. Pano ini ndinotsanangura kuti muraraungu uye kusarerekera kuchatungamira kunotungamira chinzvimbo mune tenzi script. Ini ndinotsanangurawo kuti ndeipi transhumanist ajenda iri kumashure kweichi uye nei zvese zvine chekuita nechishuvo chekuisa mutirongo vanhu muhusungwa hwakazara neAI (huchenjeri hwekugadzira). Izvo zvakakosha kuti iyi meseji ibude. Ndinovimba kuzvipira kwako uye mupiro. Tora dambudziko uye tora nguva uye simuka uchiri kugona.
Source chinyorwa listings: muiqqclept.com, alt-market.com
Tags: 2021, 2030, chinangwa, EU, Featured, mamiriro okunze, london, Macron, NATO, pamusoro, Trump, vn
Chinyorwa chikuru zvakare Martin. Kurumbidza!
Pano ndinofunga kuti zvirevo zveJohan Cruyff zvinoratidzwa zvinoshanda (kune ichi chinyorwa, mumaonero angu):
"Iwe unofanirwa kupfura, zvikasadaro haugone kushopa."
"Kana iwe usingakwanise kukunda, iwe unofanirwa kuona kuti haupere."
"Kana tine bhora, havakwanise kukwenya."
"Uchangozviona chete kana uchizozviziva."
Uye zvirokwazvo kufungidzira haina chekuita nenhabvu ..; )
Yakanyanya kunaka uye yakajeka chinyorwa. Uye kune avo vasina bhuku rako. Tenga!
Iyo yekudziya inotonhora inoiswa pasi kunge yakaipa, asi yakanakira iwe. Ndanga ndichitora svutugadzike yekugeza kwechinguvana uye mushure mechinguva chinotanga kunzwa zvakanaka. Imwe mukana ndeyekuti kurwisa kunowedzera uye kuve nehutano. Izvo zvinoshandawo kuhuropi, kudya pamwe nechokwadi. Kunzwa kutonhora pakutanga, asi kana iwe uri mukati mayo unofara uye wakacheneswa.
Ndosaka iwe uchitora chando chekugezera kubva kwandiri 😉👍
Izvi zvichava ramangwana rako kana ukasatarira kumashure ...
Wadiwa kuverenga: tarisisa zvakakukomberedza muNetherlands uye uverenge zvinyorwa zvevhiki rapfuura ...
Inenge nguva muNetherlands neEurope. Tarisa uone zvakanaka zviri kuitika. Tarisa chaizvo.
Kwete, usatarise TV kana pepanhau. Ivo vano vimbisa kuti hausi kuzviona.
Ndiri kureva: Chaizvoizvo Kutarisa Kwakanaka.
Verenga zvinyorwa pano pane saiti. Iyo ndeye nezve psycholance, semuenzaniso.
MuNetherlands zvinongori dongo uye hunyanzvi hwekuziva kuti misasa yedhijitari iri kuvhurwa nhanho nenhanho.
Smart macamera, mapurisa platoons, kamera pamusoro pemigwagwa mikuru yese. Yakakura dhata yekuunganidza ..
Verenga nhamba yemakamera iwe aunoona muzuva.
Iwo maDutch kudzidzisa-misasa misasa anonzi Mental Healthcare:
> GGZ marongero.
> Masangano evechidiki.
Kunaka kunze; kutyisa mukati.
Ndiwo maitiro aunoita kuti iwe ugurwe. Izvo zvakapihwa zita rinotapira: iyo psycholance
Kugadziriswa kwemaitiro e stasis kunogona kutanga
Iyo GGZ "homwe yekuchengetedza" kune vanopikisa vanopikisa
Diki reDutch rakadzokorora dzidzo Kunaka kunze, zvinotyisa mukati. Ona iyi mifananidzo yakavanzika kamera:
Verenga apa uone zviri kuitika:
Ona kwazvinoenda. Izvo chaizvo zvakafanana nezvakaitika kuChina:
Tichazobvunza kuparadza kweiko zvino, asi ichocho hachisi chinangwa!
Merkel yakauyawo mupiro we60 mamirioni euros ($ 66.6 mamirioni).
Merkel ichaenda rinhi kurangarira Kuurayiwa kwevaKristu veRussia kunoitwa "nemaCommunist" Tinogona kumirira nguva refu here? Zvakanaka, zvingaitika sei?
Izvi ndezvekuti ini ndikaitika zvisirizvo panguva yeHondo yeNyika ye1. Inofungidzirwa kuti inosvika 40 mamirioni
MaKristu akaurayiwa. Izvi zvinosanganisirawo zuva rekurangarira muNetherlands? Guess katatu. Ndezvipi 'vatungamiriri' vechiKristu vakanyarara?
Ah, Vrijland, urikuitei izvozvi! Izvo hazvina zvakaipa neiyo mapurisa mamiriro:
« Smart tekinoroji uye tekinoroji kutonga kwepasirese kuchachengetedza mamiriro ekunze
Mune mamiriro emapurisa, iwe unoda kurambidzwa kwekutapa mapurisa uye "vabatsiri" vanopa »
Total Visits: 16.113.527
ongorora op Canada: Chinese Dr. Xiangguo Qiu naWuhan hutachiona hwehondo yekurapa kuti iite China kuvimba neChina mhinduro